Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina Quartz Tube | I-Dinglong
Ishubhu yethu ye-quartz ifaka ubumsulwa obuphezulu, ukumelana nokugqwala, kanye nokuqina okuphezulu okushisayo nezakhiwo zemishini. Sinikezela ngezinhlobo ezahlukahlukene nobukhulu obuhlukile bamashubhu e-quartz futhi ochwepheshe bethu bazosebenzisana nawe ukwenza uhlelo lwakho lokusebenza lusebenze kahle.
Izicelo: Ukukhanyisa, i-Fiber Optics, i-Semiconductor, i-Solar
Sinezinhlobo eziningi zomkhiqizo wamashubhu e-quartz wezinhlelo zokukhanyisa futhi angahlangabezana ngokugcwele nesidingo sakho. Imikhiqizo yethu ingasetshenziswa ekukhanyeni kwendabuko, ukukhanyisa izimoto, ukukhanyisa okukhethekile, amasimu wokubulala amagciwane nokushisa.
Ama-Optical Fibers asetshenziswa njengendlela yokudlulisa ukukhanya phakathi kwemikhawulo emibili ye-fiber futhi uthole ukusetshenziswa okubanzi ekushintsheni kwe-fiber-optic. Siyaziqhenya ngokuba yingxenye yale ntuthuko futhi sizibophezele ekunikeleni ngemikhiqizo emisha nemibono yokuhlangabezana nezinselelo eziningi. Ibanga lethu lomkhiqizo lifaka ubumsulwa obuphezulu be-quartz cylinder tube, isibambo senduku, ishubhu lokunweba, ithubhu yokufaka i-fiber optics.
Ingilazi ye-Quartz idlala indima enkulu ekusetshenzisweni kwe-semiconductor. Amashubhu e-semiconductor grade quartz anokuhlanzeka okuphezulu, i-hydroxyl ephansi nokumelana nokushisa okuphezulu. Sinikezela ngamashubhu ahlukahlukene we-semiconductor quartz grade.
Ishubhu yethu yelanga yebanga le-quartz ifaka ukuhlanzeka okuphezulu ne-hydroxyl ephansi. Imvamisa isetshenziswa njengezinto eziyisisekelo zezinto ze-quartz zokusabalalisa nenqubo ye-PE ekukhiqizeni amaseli elanga.
Lawa powders e-quartz akhiqizwa endaweni eqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Ngeminyaka engama-30 yokusungulwa, uDinglong uzuze ukusekelwa okuqinile kwemishini nobuchwepheshe futhi waqongelela okuhlangenwe nakho okukhulu ngokukhiqiza izinto ezinhle ze-quartz. Izinqubo zethu zokukhiqiza zenzelwe ukuvumelana nokwethembeka - kusiza ukuqinisekisa ikhwalithi nomkhiqizo onokwethenjelwa. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasisiza ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi sakhe ukuthembana nobungani namakhasimende ethu.
Langaphambilini Quartz Powder
Olandelayo: I-Quartz Crucible
Ishubhu le-Quartz elihlanganisiwe
Izinga Lokushisa Eliphezulu Quartz Tube
I-Quartz Furnace Tube
Abahlinzeki Bamashubhu eQuartz